Posh Rust mbanye anataghị ikike A Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
posh Nchara mbanye anataghị ikike
Ọ bụ na ọ bụghị ihe doro anya? Anyị bụ nhọrọ kachasị mma maka nchara PvP Hacks - zụta Ngwaahịa -bọchị 1 taa!
Jiri anyị nchara Posh Hack gị uru n'ihi na ogologo karịa a ụbọchị ma ọ bụrụ na ị ga-amasị - ịzụta a 1-Izu Product Key taa!
Gini mere itinye onwe gi na idi uku? Nwere ike mbanye anataghị ikike ọbụna ogologo - ịzụta a 1-ọnwa Product Key taa!
Nchara Posh mbanye anataghị ikike Ozi
You bụ Rust player nke na-elekwasị anya na akụkụ PvP? Ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị eleghara anya nke egwuregwu ahụ, ọ na-akụda mmụọ na ọtụtụ ndị anaghị egwu ya! N'ikwu nke a, ọ nwere ike ịbụ n'ihi "oke ọsụsọ" niile na-eche na ndò maka ndị egwuregwu novice - ọ bụrụ na ị nọ n'akụkụ na-ezighi ezi nke noob beatdown na Rust PvP, nke a bụ ezigbo ngwaọrụ maka gị Anyị nchara Posh Hack bụ kpam kpam raara nye PvP, ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ gị mode nke oke, nke a bụ a ga-enwe ngwá ọrụ.
Enwere ọtụtụ atụmatụ PvP iji tụlee, dị ka Enemy ESP na Enemy Info (ego ole ha hapụrụ, ebe dị anya, skeleton ESP, wdg) na Rust Aimbot dị iche iche. Ọ bụ ezie na ọ nweghị atụmatụ PVE, ọ ka bụ ọrụ bara uru maka ndị na-achọ ịsọ mpi.
Posh bụ aghụghọ PVP. O nweghi atụmatụ PVE.
Ozi iro (ahụike, ụra, wdg)
ESP palettes agba
Ebumnuche-ọkpụkpụ ihe nhọrọ
Onye na-eme akpụkpọ anụ
Mgbe niile ụbọchị
Banyere nchara Posh
Rust Posh bụ PvP dị mfe nke onye ọ bụla nwere ike itinye n'ọrụ, dịka ihe ị ga - eme bụ ịgba ọsọ ahụ. Aghọghọ ahụ dị na mpụga ma enweghị ike iji ya na ọnọdụ ihuenyo zuru oke, ọ naghị abịa na HWID Spoofer (ọ bụ ezie na anyị na-enye HWID Spoofer nhọrọ maka nchara!). Nke a bụ ngwa PvP kachasị mma enyerelarị nchara maka Rust, yabụ echefula ohere gị iji nweta uru ahụ. Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa na ike gwụrụ nke adịkwa ka ahụmahụ egwuregwu, ma ọ bụ ọbụna hackers myiri, i nwere ike ịdabere na anyị nchara Posh mbanye anataghị ikike na-ị na-aga.
Gini kpatara iji Rust Posh kari ndi ozo?
Rust Posh bụ azịza zuru oke maka ndị egwuregwu PvP n'akụkụ ụwa niile. Dị ka anyị kwurula na mbụ, ọ nweghị ụdị akụkụ PvE ọ bụla, mana ọ ka na-enye gị nnukwu uru mgbe ị na-asọ mpi n'ịntanetị. You'll ga-awakpo ntọala na-egbu elu larịị Player na ngwa ngwa mgbe anyị nchara Posh mbanye anataghị ikike na-nyeere, dị ka ọ na-wuru nanị ime ka ị ghọọ a na-egbu igwe. Rust Aimbot gụnyere n'ime enweghị atụ n'ihe banyere ogo, yana atụmatụ nchekwa! Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbanye na Rust PvP na udo nke uche, ọ nweghị ụzọ ọzọ ka mma Gamepron's Rust Posh Hack!
You nwere ike ịbịaru ahụmịhe PvP gị na mmetụ onwe gị, ebe ị nwere ike ịhazi ntọala mbanye anataghị ikike dị na nchara Posh. In-game menu dị nnọọ kensinammuo na-enye gị ohere ịgbanwe nnọọ ihe ọ bụla, si ọsọ na nke anyị nchara Aimbot ga-agagharị, ruo ihe ESP nhọrọ ị na-aga ịhụ na gị na ihuenyo. Anyị niile na-eme atụmatụ igwu egwuregwu ahụ n'ụzọ dị iche, nke mere na anyị achọghị ịmachi ndị ọrụ anyị iji ntọala ntọala jikọtara ọnụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ihe, mee ya! Ọbụghị naanị nke ahụ, mana menu egwuregwu dị n'ụzọ.
A5. Ee, aghụghọ a gụnyere hwid spoofer.
A6. Mba, aghụghọ a anaghị arụ ọrụ n’ile anya
Njikere Na-achị na anyị nchara Posh Hack?